IMEX America Ijabule Ngokuthi I-US Iyayekelela Imikhawulo Yezokuvakasha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » emihlanganweni » IMEX America Ijabule Ngokuthi I-US Iyayekelela Imikhawulo Yezokuvakasha
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Imfundo • Industry Hospitality Industry • Izindaba Zokuhlangana Komkhakha • emihlanganweni • Izindaba • Ukwakha kabusha • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha
“Sijabule kakhulu ukuthi i-US inciphisa imikhawulo yokuhamba emhlabeni wonke iye eMelika kusukela ngoNovemba 8. Lokhu kunikeza ukukhanya okuluhlaza kubathengi abangamakhulu omhlaba jikelele, umbukiso, kanye nabasebenza embonini ukuthi beze eLas Vegas nge-IMEX America evulekile kuze kube uLwesine, Novemba 11. Lezi zindaba zisithokozisile. ”
Ipulatifomu ye-IMEX America izokhipha ibhizinisi laseMelika nelomhlaba jikelele, elibekelwe isikhathi esifanele ukubanjwa kusukela ngoNovemba 9-11.
Lesi sinqumo sandisa umfutho wezomnotho wase-US kanye nokuhambela amazwe omhlaba jikelele.
IMEX neMandalay Bay bazokwethula umbukiso ohlangabezana nezidingo zakamuva zezempilo nezokuphepha ezikahle.
“Siyazi ukuthi kunesidingo esikhulu, esifakiwe phakathi kwabaqeqeshi bezehlakalo zebhizinisi ukuze baphinde baxhumane ubuso nobuso futhi basebenzise i-IMEX America njengenkundla yokuqalisa amabhizinisi aseMelika nawomhlaba wonke nokuhlelela u-2022.
“Lesi sinqumo siyisikhuthazo esikhulu embonini. Okubaluleke kakhulu, kukhulisa umfutho wezomnotho wase-US kanye nezimakethe zabasebenzi kanye nomkhakha wezokuvakasha wamazwe omhlaba jikelele.
URay Bloom noCarina Bauer, IMEX Group
“Sibheke phambili ekunikezeni umphakathi womcimbi wamabhizinisi womhlaba indawo efanelekile futhi, njengoba kunguhlelo lwe-10 lwe-IMEX America, kulindeleke ukuthi kube ukuhlangana okukhetheke kakhulu. Esingakusho manje ukuthi… roll on November 8! ”
IMEX America yenzeka ngoNovemba 9-11 eMandalay Bay eLas Vegas ngeSmart Monday, enikwa amandla yiMPI, ngomhlaka 8 Novemba. Ukubhalisa - mahhala - chofoza lapha. Ngemininingwane engaphezulu mayelana nezinketho zokuhlala kanye nokubhuka, chofoza lapha.
Ezempilo nokuphepha: Ithimba le-IMEX lisebenza ngokubambisana neMandalay Bay nabanye abalingani eLas Vegas ukuletha umbukiso ohlangabezana nezidingo zakamuva zezempilo nezokuphepha futhi unikeza umphakathi isipiliyoni esiphephile, esinethezekile kodwa esingenayo inzalo.
Bonke ababambiqhaza be-IMEX America kumele banikeze ubufakazi bokugonywa okugcwele okulwa neCovid-19 ukuthola ukungena kulo mdlalo futhi bacelwa ukuthi baphrinte amabheji abo ekhaya kusengaphambili. Imininingwane eminingi ingatholakala lapha.
eTurboNews uzakwethu wezokuxhumana we-IMEX America.